Manampia hitsin-dalana bebe kokoa amin'ny Firefox's Speed ​​Dial | Avy amin'ny Linux
Ho lasa lamaody amin'ny sisa amin'ny mpitety tranonkala, Firefox misy kinova sasany lasa izay ahitana ilay malaza Speed ​​Dial izay hitantsika ao Opera, chrome o Midori, saingy nahagaga ahy foana fa tsy dia azo ovaina io.
Eny fantatro, misy ny fanitarana mba hanomezana ity mpijirika ity ity endri-javatra ity ary na dia ny hafa aza, fa ny lohahevitra dia ny hoe Ahoana no fanovana izay efa natao default? Ary rehefa te-hanova aho dia ny manampy fampidirana bebe kokoa ao amin'ny Speed ​​Dial. Soa ihany ny zazalahin'i Firefoxmania lazao anay ny fomba. Tsotra be izany:
Dingana 1: Manokatra takelaka vaovao ary manorata ao amin'ny bara About: config (tsindrio ny hoe Hitandrina aho, mampanantena!).
2 Dingana: Ao amin'ny saha fikarohana dia manorata browser.newtabpage.columns Raha atao default dia manana sanda 3 izy dia azonao atao ny manova ny isa amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa ary apetrakao ny isan'ny tsanganana tianao hananana.
3 Dingana: averinay io fiasa io ihany ary amin'ny sehatry ny fikarohana no anoratanay browser.newtabpage.rows ary amin'ny tsindry roa heny dia manova ny soatoavina izahay ary manampy na manala laharana arakaraka ny tsironao.
4 Dingana: Mamelombelona ny pejy izahay, manidy azy io ary voila, isaky ny manokatra takelaka vaovao izahay dia hanana zavatra toy izao ianao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Manampia hitsin-dalana bebe kokoa amin'ny Dial an'ny hafainganam-pandehan'i Firefox
LEHIBE !!! Nanontany tena foana aho hoe ahoana ny fanovana izany. Marina fa misy ny fanitarana an'ny antoko fahatelo, saingy nanelingelina ahy izany fa tsy an'ny an'ny Firefox.
Efa nanova ny fikirana ao anaty ahy aho 😀
Hitako ihany tamin'ny farany ny fanovana ... opera efa manao azy io amin'ny toerana misy anao ary mora kokoa ny mampiasa azy nefa mbola tsy dia sarotra loatra ... misaotra elav !!!!!!!!!!
Ny manahirana ahy dia ny tsy ahafahan'izy ireo manitsy. Tsy afaka misafidy ireo pejy tianao ianao amin'ny fampidirana ny adiresy amin'ny tanana, mila mamafa amin'ny bokotra "akaiky" ianao mandra-pahitanao ny tranonkala tianao hapetraka ao amin'ny Speed ​​Dial. Azonao atao koa ny mamakivaky ny tantara manontolo amin'ny fanaovana izany fa tsy mahita ny tianao. Ao amin'ny Opera ity fampiasa ity dia nohazavaina kokoa.
Ny tena marina, lavorary ny opéra, tokony alain'izy ireo tsy misy sazy izany.
FerGE dia hoy izy:
Vao tsy ela akory izay no nieritreretako hoe mila bebe kokoa, fa tsy te-hametraka amin'ny plug-in ho an'ity ...
Valiny amin'i FerGE
Firefox? Toa ahy io, amiko io ...
Oh eny, fantatro, tadidiko izao, ilay mpitety tranonkala taloha efa nisy talohan'ny Chrome, marina!
Tranombakoka kanto, miaraka amin'i Debian 😀
fa tsy mitsikilo anao toa Chrome Google izy ary tsy mandanjalanja ny karoka mangataka anao hampidina azy amin'ny fotoana rehetra XD
Amin'ny famonoana ireo safidy voalaza dia tsy mitsikilo koa i Chrome ary raha mbola paranoida ianao dia afaka mampiasa Chromium.
Na izany na tsy izany, ny tsiambaratelo an-tserasera na dia fahatsiarovana lavitra aza amin'ny fotoana hafa satria nanoratra nanararaotra i @elav.
Ary koa, ahoana no hataoko tsy hahitako ilay fotoana ahafahan'ny combo indroa hampihetsiketsika ny FF sy Debian!?
WEB misy ny OpenOffice izay mifanohitra amin'ny Microsoft sy Google Office.